> Resource > DVD > Nero vs Roxio - Waa kuwee waa ka wanaagsan u DVD Gubidda?
Nero iyo Roxio waa laba magac ugu caansan abuurka warbaahinta. Dhab ahaantii, marka aan tixraac Nero ama Roxio, waxaan inta badan macnaheedu Nero Gubidda ROM ama Roxio abuuraha (oo horay Easy CD wax abuura oo ay la casriyeeyay Easy Media Abuuraha). Maqaalkani waxa uu is barbar doonaa Nero Gubidda ROM 11 la Roxio abuura 2011. A Nero vs Roxio shaxda la barbardhigo ahbaa.
Nero vs Feature Roxio War iyo Bloat
Nero Gubidda ROM, ayaa markii hore la sii daayay oo ku 1997--15 sano ka hor. Ilaa version 10, si kastaba ha ahaatee, Nero Gubidda Rooma waxaa laga helayaa sida wax soo saarka taagan oo keliya ah. Hadda nooca ugu dambeeya waa Nero Gubidda ROM 11, sii daayay Dec, 2011 qoraalkii hore ee Nero version 6 gubi lahaa DVDs xogta kaliya la isticmaalayo nidaamka faylka ISO 9660. Si kastaba ha ahaatee, Nero Gubidda ROM hadda taageertaa diinta iyo dayanayaan DVD saxanno, marka lagu daro DVD ku gubanayso.
Roxio markii hore la sii daayay Easy CD wax abuura ee bilowgii qarnigii 21, sida tartan si Nero Gubidda ROM. Marka loo eego Nero ee horumarsan iyo configurable goobaha DVD encoder, Roxio xooggiisu waa in uu fududaynayo habka si dadka isticmaala si ay u abuuraan DVD warbaahinta.
Si kastaba ha ahaatee, marka la barbar dhigo nooca hore, labada Nero iyo Roxio ku daray bloat wax badan in la sameeyo xirmo Mudanayaasha ka badan 100MB (Nero vs Roxio = 110Mb vs 480Mb). In dagaal u dhexeeya kasta oo kale, waxa ay isku dayayaan in ay wax walba oo ay qof walba. Ama version cusub helo socday oo cabbaar ka xidido. Waxaase xusid mudan, DVD Creator by Wondershare ka yar tahay 50Mb, laakiin astaamaha la mid ah. Plus, labada Nero Gubidda ROM iyo Roxio abuura 2012 leeyihiin version MAYA Mac. Sidoo kale Windows ama Mac Isku day version of Wondershare DVD Creator lacag la'aan ah.
Roxio vs Nero Gubidda ROM Isbarbar
Hoos waxaa ku qoran shax is barbar dhexeeya Nero Gubidda ROM iyo Roxio abuura. Eeg oo wax soo saarka kugu habboon. Markaas hubi kale oo ka hooseeya.
Nero Gubidda ROM 11 Roxio abuura 2012
Gubasho ROM DVD Gubidda Software waxaa sameeyay Nero iyo kharash $ 50. Waxay u baahan tahay 2 GHz AMD ama Intel® processor, CD, DVD, ama drive rewritable wax guba iyo video qoraalka,, iyo 0.5GB. Abuuraha 2012 DVD Gubidda Software waxaa sameeyay Roxio iyo kharash $ 100. Waxay u baahan tahay Intel® 1.6GHz Pentium 4 processor ama AMD u dhigma, DirectX 9.0c naqshadeynta card socon (1024x768 iyo goob midabka least16-bit), drive DVD-ROM, iyo 3GB.
Habee disc menu
Jiid iyo hoos u dhac ku gubanayso
Ammaanka disc sir
Si toos ah ay la leeyihiin beelaha bulshada wadaag
Cod iyo Muqaal / Photogallery
Taako files oversized gal cajalladaha badan
Taageerada files ISO
Alternative in Nero iyo Roxio
Nero iyo Roxio loo isticmaalaa in lagu noqon DVD gubidda hufan. Si kastaba ha ahaatee, in badan oo bloatware hadda ku jira qalab-ba, taas oo ka yar dareen sidii hore, oo wax badan ka qaalisan dhanka kale. , Sidaas oo ka fog bloatware joogo, oo waxay qaadan waan kula talinayaaye - Wondershare DVD Creator , loogu talagalay la interface ah dareen iyo user-friendly. Tan ugu muhiimsan waxa ay taageertaa qaabab loo jecel yahay oo dhan. Sidaa daraadeed, waxaad gubi karaa videos aad jeceshahay iyo sawiro si DVD aan ka kaaftoomi kasta oo si fudud ku raaxaysan filimada tayo sare leh oo ku saabsan TV. Halkan waxaa ku qoran liis ay qaab taageeray:
Ogsoonow in labada Nero Gubidda ROM iyo Roxio abuura 2012 leeyihiin version MAYA Mac. Waxaad si weyn lagu talinayaa in la isticmaalo DVD Creator for Mac sida kale ah.
Sida loo Beddelaan iyo Guba iPlayer in DVD